အကောင်းဆုံး Linux mini-distribution များ Linux မှ
mini-distros ၏အရင်းအမြစ်များကိုအတူအသင်းများသည် ကန့်သတ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဟာ့ဒ်ဝဲ လျှင်အဖြစ် OS တစ်ခုမြှင့်တင်ပါ Linux ကိုအခြေခံပြီးရွေးချယ်ဖို့၊ စမ်းသပ်ဖို့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒီမှာငါပြောမယ်။
1 Linux mini-distribution ဆိုတာဘာလဲ။
Linux mini-distribution ဆိုတာဘာလဲ။
Linux mini-distribution ဆိုသည်မှာ floppy disk ကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သည့်အိတ်ဆောင်သိုလှောင်မှုနေရာများသို့လည်ပတ်မှုစနစ်အပြည့်အစုံကိုထည့်သွင်းရန်ရည်ရွယ်သောထိုစနစ်၏မူကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
floppy disk (သို့) USB key မှ စတင်၍ ကွန်ပျူတာရှိ hard disk ကိုအသုံးမပြုဘဲ Linux ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းအမျိုးအစားကိုခွင့်ပြုသည်။ အရင်းအမြစ်များအလွန်နည်းပါးသောကြောင့်အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာများသောအားဖြင့် RAM သည် 8 Mb ဖြစ်ရမည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာနီးပါးမဆို၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ကောင်းသည်။
အနည်းဆုံးအလုပ်အကိုင်: 1Mb နှင့် 50Mb အကြား
အရင်းအမြစ်များအနည်းဆုံးအသုံးပြုခြင်း - RAM 4-8 Mb နှင့် i386 ပရိုဆက်ဆာ
/ dev / ram-n ကိုဖိုင်စနစ်အနေဖြင့် RAM အသုံးပြုခြင်း
၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် hard disk မလိုအပ်ပါ။
၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဖောက်သည်များနှင့်တစ်ခါတစ်ရံ ftp, http, telnet သို့မဟုတ်အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုများ၏ဆာဗာများပါဝင်သည်
MS-DOS, GNU / Linux သို့မဟုတ် LiveCD စနစ်များကဲ့သို့သော operating system တစ်ခုမလိုအပ်ဘဲတပ်ဆင်ခြင်း။
အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ installation ကို။
လုပ်ငန်းဆောင်တာများပိုမိုထည့်သွင်းရန်အရန် disk များ။
RAM ကိုသိုလှောင်ရေးကိရိယာများအနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်စနစ်သည်အလွန်မြန်ဆန်စွာလည်ပတ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် RAM ရှိသိုလှောင်မှုသည်အခြားမည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုသိုလှောင်ခြင်းထက်များစွာမြန်သည် သို့သော်ဤအသုံးပြုမှုသည် PC ၏ RAM ကို 4Mb RAM ထက်ကျော်လွန်အောင်တွန်းအားပေးသည့်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကစနစ်အသုံးပြုမှုကိုများစွာယိုယွင်းမသွားစေပါ။ သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှ "dev / ram-n" သိုလှောင်မှုအပြင် operating system ၏ kernel နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်လည်းလိုအပ်ပါသည်။ Hard disk မပါဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည် hard disk နှင့် floppy disk အတွက် RAM ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲကန့်သတ်မှုများကြောင့်ခေတ်မီဖြန့်ဖြူးမှု၏ ၁၀၀% ကိုမရရှိနိုင်သည့်ခေတ်မီစက်များကိုညှစ်ထုတ်ရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ Linux ဖြန့်ချိမှုစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အနုမြူဗုံး: အသစ်စတင်သုံးစွဲသူများအတွက် Debian အခြေပြုအသေးစားဖြန့်ဖြူးမှုအသစ်နှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
သြစတြီးယား: သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့နောက်ထပ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခု၊ လူကြိုက်နည်းသော်လည်းအရည်အသွေးနိမ့်သည်။ အများဆုံးလိုပဲ, Slackware အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ Pentium နှင့်နောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာများတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဉာဏ်အလင်းနှင့်အတူဂရုတစိုက်ဂရပ်ဖစ်ရှုထောင့်။
BasicLinux: Mini-distribution သည်အဆင့် ၄၈၆ ကိုပြန်လည်ရယူရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Slackware ကိုအခြေခံပြီး၎င်းသည် RAM သုံး၍ floppy disk မှတိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်သည်။
ရက်စက်သည်ဖြေ - TCP / IP နဲ့ကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသေးစားဖြန့်ဖြူးခြင်း
Coyote Linux: Router Project ၏မူကွဲ၊ ၎င်းသည် floppy disk တစ်ခုမှလည်ပတ်ပြီးသင်သိုလှောင်ထားသော PC ဟောင်းသည်သင်၏ local network ကိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် router တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲစေသည်။
အသေးစား Linux ကိုသူကပြောတယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ cd တွင်အသေးစားဖြန့်ဖြူးခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်းကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစက်ကိရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ်စက်စွမ်းအားနည်းသောစက်များတွင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
DeLi Linuxဖြေ - Desktop Light Linux အတွက်အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး 486MB RAM ပါတဲ့ Terminal ၄၈၆ ခုမှာချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ XFree graphical environment သည် Slackware မှဆင်းသက်လာသည်။
FloppyFWဖြေ - ဒီအသေးစားဖြန့်ဖြူးမှုကသင့်ကို static router တခုကို firewall ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်တယ်။
microLINUX_vem - GNU / Linux ပညာရေးဆိုင်ရာအသေးစားဖြန့်ဖြူးမှုကိုစပိန်ဘာသာ၊ စာသားပုံစံအနေဖြင့်၊ ၁.၄၄ Mbyte floppy disk ပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားခြင်း (သို့) Windows system window မှ run ရန်။
MoviXဖြေ - CD မှကိုယ်ပိုင် bootable multimedia အသေးစားဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
muLinuxဖြေ - Hard disk ထဲမှာတပ်ဆင်လို့ရတဲ့ Mini-distribution ။ ၎င်းသည်အသေးငယ်ဆုံးဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကွန်ပျူတာဟောင်းများနှင့်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ခွေးကလေး Linux ကိုဖြေ - ၄ င်းဟာ hard disk တခုမှာ install လုပ်နိူင်တဲ့ live distribution တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည် RAM အနည်းငယ်သာလိုအပ်ပြီးကွန်ပျူတာဟောင်းများတွင်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။ Fvwm95 နှင့် JWM duality ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
SliTaz Linux: 128MB RAM ပါသောဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်တွင်လည်ပတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် CD 30 MB နှင့် 80 Disk ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့် hard disk တွင် 16 Mb ရှိသည်။ XNUMX Mb ရှိတဲ့ RAM က JWM window manager ရှိတယ်။
အလွန်သေးငယ်သော linuxဖြေ - Mini-layout ကခေတ်မမီတော့တဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာအသုံးပြုဖို့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာ။
Tiny Core Linuxဖြေ - Tiny Core Linux ဟာအနည်းဆုံး (10MB) အနည်းဆုံး Linux Desktop ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည် Linux 2.6 kernel, BusyBox၊ X, FLTK GUI နှင့် flwm window manager တို့ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
အချစ်TinyMe ဆိုတာ Linux အခြေပြုအသေးစားဖြန့်ဖြူးခြင်းပါ။ ၎င်းသည် Unity Linux ကိုကွန်ပျူတာများအဟောင်းများတွင်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်း၊ developer များအတွက်အနည်းဆုံးထည့်သွင်းမှုနှင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များသာလိုအပ်သည့် Linux ကိုအမြန်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်တည်ရှိသည်။
Tombsrtbt: Tomsbsrtbt သည် floppy disk တစ်ခုပေါ်တွင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။
Linux Vectorဖြေ - Slackware ကိုအခြေခံပြီး 32MB RAM နဲ့ 1GB hard drive တို့နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ အမှုပေါ် မူတည်၍ XFCE / KDE ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်။ ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်သည့် livecd ဗားရှင်းရှိပါသည်။
ZenWalk Linuxဖြေ - အရင်က MiniSlack လို့သိကြတဲ့ဒီ Slackware-based distribution ဟာရိုးရှင်းပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ၎င်းသည်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောကွန်ပျူတာအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်: Pentium III နှင့် 128 Mb RAM ။
Linux mini-distros စာရင်းအပြည့်အစုံ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » အကောင်းဆုံး Linux mini-distribution များ
Sebastian Varela placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
Sebastian Varela ကိုပြန်ပြောပါ
Daniel Soster ဟုသူကပြောသည်
အကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာ TinyCore ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိတွေ့မှုရှိ hardware အားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးဂရပ်ဖစ်အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုမည်သို့ရှိကြောင်းကိုအထင်ကြီးစေပြီး၎င်းတွင်ထိပ်တန်းတွင် repositories အမျိုးမျိုးရှိသည်။ မည်သည့် PC ကိုအသစ်ကကဲ့သို့အလုပ်လုပ်စေသည်။ WIFI အထောက်အပံ့နှင့်ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုး (64mb သာ) ပါသောဗားရှင်းအသစ်လည်းရှိသည်။
Daniel Soster အားပြန်ကြားပါ
Paco Puig ဟုသူကပြောသည်
Trinux ကိုယခု ubuntutrinux ဟုခေါ်သည် http://code.google.com/p/ubuntutrinux/ ။ သင်ထည့်လိုက်သောအရာသည်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတစ်ခုသို့ ဦး တည်နေသည်
Paco Puig သို့ပြန်သွားပါ
ဟားဟား! သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖက်သည်! ရှင်ပေါလု။
ရောမ Esparza ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ဟာကျွန်တော့်ဘဝကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါ xD လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်
Roman Esparza အားပြန်ပြောပါ
DSL သည် .UCI program ကို install လုပ်ရန် (သို့) Debian repositories ကိုထည့်ရန်ကျွန်ုပ်လမ်းရှာမတွေ့သော်လည်း (DSL) ပိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တစ်ချိန်ကအကြောင်းရေးသားခဲ့သည် (http://hayardillasenlared.blogspot.com/2011/06/instalar-damn-small-linux-en-el-disco.html)
Juan Jose Garces Garcia က ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ သင် dodoulinulinux သို့မဟုတ် chyme ပုံစံတစ်ခုခုကိုအကြံပြုလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တွင် ၄ နှစ်တာကာလအတွက် ce နှင့် 128Ram ပါသည့်မှတ်စုစာအုပ်သေးငယ်သည်။
Juan Jose Garces Garcia ကိုပြန်ပြောပါ
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ဒီဗားရှင်းဘယ်ဟာဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ Desktop ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်။
Edwin Morales Z ကို ဟုသူကပြောသည်
Old Slax သည်သင့်ကိုယ်ပိုင် Live-CD ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
New Slax - သင်၏ Live-CD ကိုဖန်တီးရန်ထို option ကိုဖွင့်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။
Edwin Morales Z ကိုစာပြန်ပါ